DOWNLOAD Junkers Ju-52 FS2004
Junkers Ju-52 FS2004 HOT
Ny Junkers Ju-52 no malaza indrindra alemà mitondra nandritra ny ady. Dia nandatsaka paratroopers tany Holland, Kreta, ary tatỳ aoriana tao amin'ny Ardennes.
Ity fiaramanidina dia miadana sy tena kely basy. Ho vokany, dia niaritra fatiantoka amin'ny ankamaroan'ny asa fitoriana, indrindra fa any Kreta sy Stalingrad. Dia nitondra ny fanomezana miaramila any Afrika Avaratra, Stalingrad sy ny Baltika fanjakana. Koa izy nanompo ho namany Sary fitaterana ao Shina ary efa fitaovana tamin'ny mitsingevana mba hitaterana vatan-kazo eo amin'ny tampon-tanety any Kanada.
Ny Ju-52 afaka fiaramanidina avy any Berlin ho any Roma tamin'ny valo ora ny Alpes, mahavariana Feat tamin'izany fotoana izany. Ny farany Ju-52 Nafahana tamin'ny Soisa Air Force tamin'ny faramparan'ny 80s. Mahery 50 taona taorian'ny ...! Ny tantara ity fiaramanidina no mahatahotra. Dia tsy handeha hanadino malaza io fiaramanidina!
Izany dia add-on manana kalitao tena tsara, misy modely 3 ary takelaka maromaro izay misy ao amin'ny Air France sy ny Luftwaffe.
Ny rafitra dia tanteraka asany any 2D sy 3D (VC virtoaly cockpit).
Ankoatra izany, dia afaka mitsidika mihitsy aza ao anatin'ny fiaramanidina sy 3D.
Ny fiaramanidina tsara tarehy ho an'ny mpankafy fahiny modely.